संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा सीमाक्षेत्रको अवलोकन, सीमास्तम्भ यकिन गरी समाधान खोज्न आग्रह | नयाँ शक्ति नेपाल
कञ्चनपुर – नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले कञ्चनपुरको पुनर्वासस्थित नेपाल/भारत सीमा क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका डा. भट्टराईले पुनर्वास क्षेत्रको सीमाको समस्या हल गर्नका लागि हराएको २०० नम्बरको सीमास्तम्भको खोजी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
उहाँले हराएको स्तम्भ पहिले कहाँ थियो त्यसको यकिन गरी छिटो भन्दा छिटो सीमा विवाद समाधानका लागि नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई पहल गर्न आग्रहसमेत गर्नुभएको छ ।
यसै क्रममा संयोजक डा. भट्टराईले गत फागुन २६ मा पुनर्वास नगरपालिका ४, आनन्दबजारमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको गोली लागेर सहिद हुनुभएका गोविन्द गौतमको परिवारलाई समेत भेट्नुभएको छ ।
परिवारसँगको भेटका क्रममा शहीद गौतमको परिवारले सरकारले छोराछोरीहरूलाई पढाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरेको भएता पनि अहिलेसम्म सरकारबाट केही पनि नपाएको गुनासो पोखेको छ । सहिद परिवारको गुनासो सुने पश्चात संयोजक भट्टराईले त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।
त्यस्तै फागुन २६ गतेको घटनाका घाइते टिकाराम चापागाईं र उहाँको परिवारलाईसमेत संयोजक भट्टराईले भेटघाट गर्नुभएको छ । परिवारले उहाँसँग भेटका क्रममा उपचार खर्च नपाएको गुनासो गरेको थियो । परिवारको गुुनासोप्रति संयोजक भट्टराईले घाइतेको उपचार खर्च उपलब्ध गराइदिन स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गर्नुभएको छ । साथै उहाँले सोका लागि सरकारसमक्ष आफूले उचित पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।
केही दिनदेखि संयोजक भट्टराईलगायत नयाँ शक्तिको केन्द्रीय नेतृत्व चुनावी अभियान अन्तर्गत ५ र ७ नम्बर प्रदेशका चुनावी कार्यक्रमहरुमा व्यस्त रहनुभएको छ ।